Chii chinonzi DevOps uye Nei uchishandisa Iyi Nzira Yekuvandudza? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
DevOps, Technology Kubvunza, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
DevOps iapplication iri kuvhara akati wandei mafilosofi, maturusi, uye maitiro anogona kuunza masevhisi nekushandisa nenzira iri nani uye nekukurumidza. Nerubatsiro rwe DevOps, zvinokwanisika kusimudzira mhando uye kuendesa masevhisi mune zvirinani. Izvo zviri nani pane tsika dzechinyakare uye nzira dzinoshandiswa musangano. The Software utariri uye budiriro miitiro vaona shanduko yakakura mumakore mashoma apfuura.
Kunyange makambani ari kushandisa DevOps inogona kuona zvirinani masevhisi evatengi uye inopa makwikwi emusika. Zvino, iyo budiriro uye mashandiro mapoka zvakabatanidzwa pamwe chete kushandisa DevOps approach for the Software development. Ivo vaviri vari kushanda pamwechete kuti vavhare chikamu chose che software yekuvandudza lifecycle kubva pakuronga kuendesa uye kuisiya munzvimbo yekurarama kuti mushandisi ashandise.
Makambani mazhinji ari kubatanidza zvikwata izvi kuti zvivabatsire kunzwisisa hunyanzvi hunoshandiswa muhunyanzvi. Zvino mukati DevOps dzidzira, timu yekushanda inonzwisisa pfungwa uye tekinoroji senge kuyedza, sosi kutonga uye kukurumidza kukura iyo yaishandiswa ne Developers panguva yechinyakare nzira. Nokufamba kwenguva, DevOps akaenda mhiri kwe Indaneti yekutanga-ups chikamu uye ikozvino yakaverengerwa mune runyorwa rwetekinoroji inoshandiswa zvakanyanya nemasangano.
izwi DevOps chimiro chakabatanidzwa che Development uye Opkukanganisa. Pano Dev inonzi seyakazara nhengo dzechikwata dzinobatsira mukugadzirwa kwechigadzirwa. Izvi zvinosanganisira timu yakazara inosanganisira yehutano vimbiso, chigadzirwa chinobudirira, Software testers, nedzimwe nhengo dziri muchikamu chebudiriro. Iyo Ops inofananidzira system uye Database manejimendi, system mainjiniya, chibatiso nyanzvi, network uye kuburitsa mainjiniya, nezvimwe.
Kuteerera: DevOps yakabatsira mukumhanyisa hurongwa hwekuvandudza. Kunyangwe kana musika uchichinja, iwe unozogona kuenderana nezvose. Ichapa mhedzisiro inobudirira uye kuwedzera kubereka mu bhizimisi.
kuvimbika: The DevOps Model yaita kuti kugadzirisa kwechikumbiro kuve nyore. Ikozvino, harisi basa rekurovera tsinga kuita chero shanduko muzvivakwa kana kuendesa Software nekuchengetedza hutano hwakakodzera sezvinodiwa nemushandisi.
Izvi zvakaitwa kuvandudza ruzivo rwemushandisi. Iwo maitiro akaita kuti zvive nyore kuyedza zvese zvinoshanda uye kuchengeta iyo chibatiso of Software mupfungwa vari- kuenderera kusangana uye dhirivahari. Iwo chaiwo-nguva maitiro metrics ndezvimwe zvinhu zvinoshandiswa kuchengetedza kuvimbika kwe Software by zvichiongororwa uye matanda.
Kurumidza Kuendesa: The DevOps nzira yakawedzera kuwanda kweprojekiti zvakanyanya izvo zvakabatsira mukuunza Software muyero inoshanda uye nekukurumidza. Iko kuvandudzwa kwechigadzirwa kwakabatsira mukuunza nenzira iri nani kupfuura yaitarisirwa. Yakavandudza mhinduro yemutengi uye yakapa kukwikwidzi kumucheto kune bhizimisi. Zvakare, yakavandudza maficha anobvumira mukukurumidza kugadzirisa kwebhugi uye kuburitsa iyo application munzvimbo yekugara.
Kubudirira: DevOps kudzidzira kunosanganisira kuenderana uye kushandisa michina pane imwe nhanho. Izvi zvakakwanisa kudzikisa njodzi apa timu ichiita shanduko mune zvinodiwa nesystem kana kugadzirisa kuomarara kweprojekti.
chibatiso: DevOps yakavandudza application nenzira inobvumira mushandisi kufamba nekukurumidza pasina kukanganisa kutonga uye kugamuchirwa kweapp. Kunyange mitemo iyo a DevOps inopa ndeye otomatiki inopa kubata pakutonga, manejimendi, uye
Chikamu chekubatana: The DevOps huzivi huri kusimbisa kukosha kwakakosha kwekuzvidavirira uye kuve muridzi kuitira kuti uuye nenhengo dzechikwata dzine ruzivo. Izvi zvinoguma nekubatana kwepedyo kwechikwata chinobatsira mukugovera basa reprojekiti uye kutonga mafambiro ebasa. Iko kusanganiswa kunobatsira mukudzivirira chero rudzi rwekushaya simba kunowanzoitika mupurojekiti kana ichiendeswa kune boka rekushanda.
Zvikamu zveDevOps Kukura
Kuvandudza Mapopoma: Iyi nzira yaishandiswa zvakanyanya muchinyakare kuvandudza uye kushanda chikamu. Mune izvi, macode akanyorwa nenhengo yechikwata chekuvandudza munguva ye 3-4 mwedzi. Ipapo, ivo vakasanganisa iwo makodhi kuti avasunungure mumamiriro
Nekudaro, apo nhamba dzakasiyana dzemakodhi dzakasanganiswa pamwe chete izvo zvinoguma nekuuya nemabhugi mazhinji ayo akatora pamusoro pemwedzi kuti achinje iwo usati wasangana maitiro. Iyi yanga isiri nzira yakanaka inokonzeresa padanho rekugadzira.
Kuenderera kusangana. Ipapo, iyo inoenderera yekubatanidza nzira inopinda mukutamba. Mune izvi, macode akanyorwa na Developers zvinosanganiswa nekukurumidza nekodhi huru kuitira kuti Software inogona kusunungurwa. Iyi nzira inobatsira mukuchengetedza nguva sezvo timu inoramba ichibatanidza kodhi kuburitsa.
Izwi iri rakaunzwa kune nyika yekodhi se agile engineering maitiro iyo yaishandiswa senzira ye extreme programming. Zvino, DevOps vakatora izwi kuti vagone kubudirira kuita chirongwa chakabatanidzwa mukuburitswa. Mune izvi, iyo kodhi inotariswa, ichishandisa macode anoshandisika kuunganidza iyo kodhi uyezve kuita yekusimbisa nzira dzekuyedza.
Kuramba Kuendesa: Ichi ndicho chikamu chechipiri che DevOps kuenderera mberi kubatanidzwa. Mariri, Developers wedzera kumwe kwekuyedzwa kana kushandisa michina matekinoroji anobatsira mukuchengetedza kusangana pakati pekodhi nekodhi huru. Iyo kodhi ichave yakagadzirira kuendesa isina yekumanikidza kupindira. Izvi zvinobvumidza kambani kuti igare mune yakagadzirira-kuendesa chikamu nekuenderera.
Kuenderera Mberi: Iyi ndiyo fomu yekupedzisira uye yepamberi nzira yekuendesa. Iko hakuna kupindirana kwemaoko apo kuisirwa kwechigadzirwa kunoenderera. Kana timu irikushandisa inoenderera nhanho yekuendesa saka ivo havaendese chero kodhi pasina kuyedzwa. Aya makodhi anotanga kupinda muchikamu chekuyedza wega wozoenda kune mupenyu
Nekudaro, vese vashandisi havabvumidzwe kutarisa iyo Software sezvo vateereri vashoma chete vanogona kuishandisa. Ipapo kune loop yeotomatiki mhinduro iyo, gare gare, inoteverwa uye inotariswa kutarisa kushandiswa, kuvimbika, uye mhando kodhi isati yatangwa kune wese munhu.
Zvishandiso zvakakosha zvinoshandiswa muDevOps:
Kunobva kodhi kodhi: Pano Developers unogona kutarisa nekuchinja macode kuitira kuti Developers haufanire kunyora kodhi zvakare uye zvakare kune mamwe mapurojekiti.
Seva anovaka: Ichi chishandiso chinoshandiswa kuumbiridza kodhi mune yekodhi kodhi repodhi mune inoitisa kodhi base.
Kugadziridza manejimendi: Iyo inoshandiswa kugadzirisa nharaunda kana sevha nekushandisa maturusi akadai saChef naPuppet.
bvunzo kushandisa michina: Mune izvi, iyo Developers edza ma modules e Software kuchengetedza track nguva dzose kuitira kuti vave nechokwadi chekuti application yakagadzirira kutumirwa.
DevOps zvaita kuti zvive nyore kubvisa zvipingamupinyi zvese zvaiita kuti mugadziri agare akakakamira pachigaro chake kwemazuva mazhinji. Yakakwanisawo kubvisa dambudziko rese rakatarisana nemugadziri uye timu yekushandisa panguva yekutaurirana chirongwa. Yakatenga kuvimbika pakati pezvikwata nekuwedzera kushanda uye kusagadzikana. Vatengi vave kukwanisa kuwana sevhisi iri nani nekusimudzira uye timu yekushanda inokwanisa kuzadzisa zvinangwa zvavo nenzira inoshanda.
Inoda tech solution ye bhizimisi? Taura nekutaurirana.